FANDISOANA TSAHO NIELY : « Ampy tsara ny famatsiana solika manerana ny Nosy », hoy ny Tale jeneralin’ny OMH
Niely tamin’ny tambajotran-tserasera ny feo nilaza fa tsy ampy ny famatsiana solika eto an-drenivohitra tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. 22 octobre 2019
Nitondra fanazavana mahakasika izany ny tale jeneralin’ny Ofisy Malagasy misahana ny solika (OMH), Laurent Rajaonarivelo ary nanitsy fa “tsy mitombina velively ny mahakasika io tsy fahampian’ny solika io, ampy tsara ny famatsiana solika manerana an’i Madagasikara ary isan’izany ny eto an-drenivohitra.” Ny tsaho niely voalaza etsy ambony no fantatra fa nampikorotan-tsaina ny mpampiasa fiara ka nahatonga azy ireo nilahatra nanovo izany teny amin’ireo toby mpaninjara solika sasantsasany teto an-drenivohitra.
“Iny tsaho iny no nampirisika ny olona maromaro hitondra ny fiarany haka solika bebe kokoa noho ny filany isan’andro teny amin’ny tobin-tsolika ary izany rehetra izany no nahatonga ny tobin-tsolika maromaro eto an-drenivohira tsy nanana tahiry intsony nandritra iny faran’ny herinandro iny”, hoy ny fanazavan’ity Tale jeneralin’ny OMH ity. Nomarihiny koa fa efa miverina amin’ny laoniny izany hatramin’ny omaly satria misy ireo kamiao mpitatitra solika namatsy ireo nanana olana.
Nomarihiny nefa fa mba hisorohana ny olana amin’ny mety ho fahataran’ny sambo mpamatsy solika an’i Madagasikara isam-bolana dia tsy tokony hirobaroba amin’ny fanangonana solika ny mpampiasa fiara sy ny mpamily. “Ny tahirin-tsolika dia ampy raha toa ka tsy misy ny fanangonana be loatra mihoatra ny tokony ho izy ataon’ireo mpamily fiarakodia mandra-pahatongan’ny sambo mpamatsy solika ny firenena izay tonga isam-bolana”, hoy hatrany ny fazavany.